Ekpere maka azụmahịa. ? Ọrụ na ụba | Saint Jude Thaddeus
Ekpere maka azụmaahịa ụwa Ime mmụọ bụ eziokwu nke anyị na - enweghị ike ịgbanarị ma ọ bụ leghara anya, ọ bụ ya mere na mgbe anyị malitere ọrụ ọhụrụ ọ dị mma ịme a Ekpere maka azụmahịa Anyị na-amalite
Iji bụrụ azụmaahịa a gọziri agọzi, ka ike dị mma na-aga mgbe niile. Anyị nwere ike ịrịọ maka ịba ọgaranya na onye ọ bụla batara azụmaahịa anyị nwere udo na ịdị jụụ.
Kpee ekpere maka azụmahịa abughi ihe kwesiri mgbe ọ na - amalite, anyị nwere ike ikpe ekpere maka azụmaahịa ndị nweburu oge ije.
Ihe dị mkpa bụ ịgọzi ya n’aha nke Nna, Ọkpara na mmụọ nsọ ma kwere na ekpere anyị kpere nwere ike.
N'ebe ndị ahụ ebe azụmaahịa na-abụghị nke anyị mana ọ bụ nke enyị ma ọ bụ onye ikwu anyị, anyị nwekwara ike kpee ekpere ka a gọzie ma na-enwe ọganihu na azụmahịa ahụ.
1 Ekpere maka azụmahịa Gịnị ka ọ bụ?
1.1 Ekpere ka ị gọzie azụmaahịa a
1.2 Maka ọrụ na ọtụtụ azụmahịa
1.3 EKPERE diri St. Jude Thaddeus maka ahia
Ekpere maka azụmahịa Gịnị ka ọ bụ?
Ekpere maka azụmaahịa dị mkpa n’ihi na ọ bụ site na ya anyị nwere ike ịchọta ụzọ azụmahịa ahụ ga-emerịrị, cheta na ọtụtụ oge anyị chọrọ ịme otu ihe mgbe anyị kwesịrị ime ihe dị ezigbo iche ma nke a bụ Site n’ekpere, anyị ga-enweta adres anyị chọrọ ime ezi mkpebi ma gaa n’ụzọ dị mma.
Anyị ruru eru n'ụzọ ime mmụọ ịgwa Chineke na ndị nsọ okwu, anyị enweghị ike ichere ọzọ ka ọ bịa gọzie ihe anyị bụ, n'ezie anyị nwere ike ịdabere na enyi ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ mana ibu ọrụ ime mmụọ bụ nke anyị, yabụ anyị ga-amụta ịtụkwasị obi Ekpere nke anyi
Anyị enweghị ike ịrịọ maka akụ na ụba ma ọ bụrụ na anyị ekwetaghị na ọ ga-ekwe omume iru ya, karịa karịa ịmụ ikpe ekpere.
Anyị ga-enwerịrị okwukwe na ekpere anyị na-ekpe ga-eru n’eluigwe nakwa na ọ ga-emezu ebumnuche anyị.
Chere nzaghachi site na nke anyị ekpere ọ nwere ike ịbụ ihe kachasị sie ike mana Ọ bụrụ n’anyị tụkwasị obi, ọ ga-ewere ihe anyị rịọrọ ka ukwuu rute.
Ekpere ka ị gọzie azụmaahịa a
Onye nwem, a na m arịọ maka enyemaka gị ka ịmalite azụmahịa m. Are bụ ezigbo onye inyeaka m na ezigbo onye mmekọ m.
Biko sonyere m na njem ọhụrụ a ka m nwee ike ịga nke ọma. Maka m, ezinụlọ m na ndị ahịa m ga-efe. Nye m ikike iche echiche gị.
Amamihe na ntuzizi m maka azụmaahịa m ka ọ baa ọgaranya ma mee ihe dị mma. Maka anyị niile n'aha gị nke eluigwe.
Undba ụba, ntụgharị, mkpebi ime mkpebi, echiche ọhụụ na ọtụtụ arịrịọ ndị ọzọ anyị ga-etinye n’iru Chineke onye nwere ike ime ihe niile iji nye anyị enyemaka ebere ya.
Ọ dịghị onye maara karịa gị mkpa ndị nwere ike ibilite na azụmahịa gị, gwa Chineke okwu ma were nke ọ bụla n’ime ha gosi ya.
Chetakwa na ikpeekwu okwu bụ ịgwa Chukwu okwu, mgbe gị na ya kparịta ụka, echezọkwala inye ya oge ọ ga-aza, ka i jiri ihe ndị ahụ kwado gị.
Ọ bụghị ihe niile ga - eme dịka anyị chọrọ ka ọ mee, mana ọ bụrụ na anyị atụkwasara Onyenwe anyị obi, o doro anyị anya na ihe ọ bụla merenụ bụ maka ngọzi anyị.
Maka ọrụ na ọtụtụ azụmahịa
Onye nwem, a na m arịọ maka enyemaka gị ka ịmalite azụmahịa m. Are bụ ezigbo onye inyeaka m na ezigbo onye mmekọ m. Biko sonyere m na njem ọhụrụ a ka m nwee ike ịga nke ọma.
Maka m, ezinụlọ m na ndị ahịa m ga-efe. Nye m ikike iche echiche gị.
Ọtụtụ mmadụ ịmalite azụmahịa ọhụrụ ha chọrọ inwe ọ enjoyụ n'ụba n'amaghị na ọ na-abịa n’ihu mgbe anyị na-arụ ọrụ.
Yabụ na ịrịọ ihe n'ụba n'enweghị ọrụ bụ ịrịọ n'efu. Akwụkwọ Nsọ na-akuziri anyị na okwukwe na-enweghị ọrụ nwụrụ anwụ, yabụ anyị ga-arịọ Chineke ka o nye anyị nri n'ụba, kamakwa ka ọ rụọ ọrụ ka anyị nwee ike iru ya.
Anyi aghaghi imuta otu ahịrịokwu n'ụzọ ziri ezi, anyị enweghị ike ịrịọ maka ihe na - adịghị anyị mkpa, anyị na - arịọ maka ihe bara uru mana ọ bụghị akụ na ụba.
Dịka ọmụmaatụ amamihe, anyị nwere ike nweta ọtụtụ.
EKPERE diri St. Jude Thaddeus maka ahia
N'oge a anyị na-arịọ gị ịrịọ arịrịọ n'ihu Nna anyị nke Elu-igwe,
Isi mmalite nke ọtụtụ ọrụ na nri maka ezinụlọ anyị,
Kpuchie ngọzi niile,
Nweekwa ndị niile na-arụ ọrụ na ya.
Ka Onye Kasị Elu gọzie ọrụ anyị, +
Ka obi di nma n’anya ya.
Ekwela ka ebe ọrụ a,
Anara ego ma ọ bụ mkpụrụ nke azụmaahịa ọjọọ,
K'anyị mee ihe niile anyị kwesịrị nsọpụrụ,
K'anyị rụọ ọrụ n'eziokwu,
Were ụgwọ zuru oke ma jiri ịhụnanya jeere ụmụnna anyị ozi,
Nyere anyị aka iru ihe mgbaru ọsọ setịpụrụ maka azụmaahịa na azụmaahịa anyị.
Anyị na-arịọ gị ka ị kụnye ịhụnanya nke Chineke n'ime anyị,
Nye ndị niile na-arụ ọrụ n'ebe a,
Ka ọ bụrụ ịhụnanya nke Chineke na ezinụlọ anyị,
Ndị n'enyere anyị aka ịrụ ezigbo ọrụ,
Gọzie echiche anyị, omume anyị na okwu anyị,
Anyi na ario Gi n’aha Onye Nzoputa anyi, Amen.
Okwu Chineke kuziri ayi na aghaghi ịba ọgaranya dịka mkpụrụ obi anyị na-aga nke ọma na anyị n’achọ alaeze Chineke na ikpe ya ziri ezi na ihe ndị ọzọ ga - agbakwunye, yabụ anyị na-etinye ike anyị niile n’inye mmụọ anyị nri, otu a anyị na - ekwe nkwa na ịba ụba na - abịa n'ụzọ n'ihi na Chineke kwere nkwa.
Ka anyi tukwasiri obi n ’ekpere ma n’ oru ka ihe anyi na acho gha abiakwute anyi ngwa ngwa.
Can nwere ike ikpe ekpere karie ekpere siri ike maka ọrụ achụmnta ego na ụba na Chineke na St. Jude Thaddeus?
I nwere ike kpee ee.
Ihe dị mkpa bụ ka i jiri obi gị niile kpee ekpere.
Ọ bụrụ n’inwe okwukwe na ọ bụrụ n’inwere nkwenye na ihe nile ga - adị mma, ị ga - ekpe ekpere n’enweghị nsogbu.
Cheta ka ikwere na ihe nile ga - adi nma!